Al-Shabaab oo dab qabadsiisay degaan hoos taga Jalalaqsi | KEYDMEDIA ENGLISH
Al-Shabaab oo dab qabadsiisay degaan hoos taga Jalalaqsi
Keydmedia Online ayaa hore u baahisay in Kooxda Al-Shabab, ay kordhisay cadaasiska ay saareyso dadka deggan tuulooyinka ay ka arrimiyaan ee dhaca Koofrta dalka, waxaana hore looga guuray tuulooyin badan oo ku yaalla Shabeellooyinka.
JALALAQSI, Soomaaliya – Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan, ayaa sheegaya in Kooxda Al-Shabaab ay gabi ahaanba gubeen guryihii ku yaallay tuulo lagu magacaabo “Dirgoos-qoraxsin” oo hoos tagta degmada Jalalaqasi.
Sida ay dadka degaanku sheegeen, ma jiro guri ku yallay tuulada oo badbaaday, xilli aysan caddeyn sababta Kooxda xiriirka la leh, Al-Qaacida ee Al-Shabaab u bartilmaameedsadeen tuuladaan oo dhacda jahada koofureed ee Jalalaqsi.
Guddoomiye ku-xigeenka degmada Jalalaqsi, Mire Xuseen Siyaad, oo dhankiisa ka hadlay dabka “Dirgoos-qoraxsin” ayaa sheegay in Maamulka degmada aad ugu xunyahay khasaaraha xooggan ee dabkaas ka dhashay.
“Waxaan ka xumahay dhibka ka dhacay maanta tuulo lagu magacaabo “Dirgoos-qoraxsin” taas oo hoos timadda degmada Jalalqasi, kana xigita dhanka kofureed, waxaan Alle u weydiinaya beddel kheyr qaba”. Ayuu yiri Mire.
Dhamaadkii bishii hore, Qaasim Cali Nuur oo ah Guddoomiyaha degmada Balcad, ayaa sheegay in Al-Shabaab gubeen tuulooyinka Mukay-dheere iyo Mareereey, oo ku yaalla gobolka Shabeellaha dhaxe.
Sababta ay Al-Qaaciddada Bariga Afrika, u gubeen tuulooyinka, ayuu ku sheegay in dadka degaanku soo dhaweeyeen ciidan ka tirsan xoogga dalka oo howl-gallo ay ka wadeen degaanka ku tagay Mukay-dheere iyo Mareereey.
Tan iyo dhamaadkii 2020, Al-Shabaab, waxa ay cadaadis xooggan ku heysay dadka deggan tuulooyinka ay xukumaan, taas oo sababtay inuu siyaado barakaca dadka reer miyaga ah oo colaado daran iyo abaro xooggan sanadkaan aafeeyeen.
Maamulka waqtigu ka dhamaaday ayaa mar hore indhaha ka laabtay, wax ka qabashada dhibaatooyinka Al-Shabaab ku hayaan dadka degaanka, halka saraakiishii ciidanka ee la doonayay in ay wajahaan Al-Shabaab, ay ka shaqeynayaan boobka doorashada.